Shuruucda xashiishada ayaa ku nastay Thailand Bisha soo socota • Daroogada Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Sharciyada xashiishada ayaa laga fududeeyay Thailand bisha soo socota
maqaal by Ties Inc. 19 May 2022
Qof kasta oo danaynaya inuu beero dhirta xashiishadda iyo hemp ee loogu isticmaalo guriga ee Thailand wuxuu awoodi doonaa inuu sidaas sameeyo laga bilaabo bisha soo socota iyada oo aan fasax laga helin maamulka. Dhirta ayaa laga saarayaa liiska maandooriyaha ee Qaybta 5.
Beeralayda dhirta xashiishka iyo hemp waxay u baahan doonaan inay iska diiwaan galiyaan Pluk Kan, oo ah codsi mobilada oo ay samaysay oo ay maamusho FDA. In kasta oo la fududeeyay sharciga, soosaarrada ka kooban in ka badan 0,2% tetrahydrocannabinol (THC), oo ah xarunta ugu weyn ee nafsiga ah ee xashiishadda, ayaa wali loo aqoonsan doonaa inay tahay walaxda Qaybta 5 waxaana nidaaminaya sharciyada la xidhiidha xakamaynta daroogada iyo xakamaynta, sarkaal ka tirsan FDA ayaa yidhi.
Qof kasta oo raba inuu u beero dhirta xashiishka iyo hemp arrimo ganacsi waa inuu ogolaansho ka codsadaa maamulka. Laga bilaabo 9ka Juun, fasaxa looma baahna in la soo dejiyo abuurka xashiishka ama qaybaha kale ee dhirta. Taa baddalkeeda, soo dejinta alaabooyinkan waa la ogolaan doonaa oo loo nidaamin doonaa si la mid ah abuurka kale ee dhirta, ayuu yidhi.
Soosaar xashiish ah oo dibadda laga keeno
Alaabooyinka lagu sameeyo xashiishadda laga keeno Thailand ee laga keeno waddamo kale, haddii ay shakhsi ahaan u soo diraan dadka safarka ah ama boostada, waxaa lagu maamuli doonaa sharciyo kala duwan oo ku xiran noocyada alaabta, ayuu yidhi. Kuwaas waxa loo qaybin karaa qiyaas ahaan laba qaybood: cuntooyinka dibadda laga keeno iyo waxyaalaha la isku qurxiyo.
FDA waxay wali ka shaqaynaysaa inay wax ka beddesho ilaa todobo sharci oo loo baahan yahay si ay u oggolaato oo u nidaamiso alaabada kale ee dhirta ee laga sameeyay xashiishadda iyo hemp.
Xigasho: Bangkokpost.com (EN)
Xamaasada CBD Beyoncé waxay ku dhawaaqday inay tahay…
Harvard waxay heshay habab cusub oo loo isticmaalo xashiishadda…
Snus sidoo kale waxaa loo kala saari doonaa mid aan qiiq lahayn sanadka 2020